Forum serasera malagasy Zanaka - Dinika forum.serasera.org
Adino ny tenimiafina
Dinika - forum
Lisitry ny lohahevitra
Tadiavo ny lahatsoratra
Artista sy Hira
Fety sy fihaonana
Hatsikana sy lalao
Hoy ny gazety
Hoy ny lalàna
Momba ny serasera.org
Tetikasa sy vinavina
Lohahevitra : Fanabeazana
Fitohizan'ny hafatra : Zanaka
Valiny : 2
andriaraholi - 23/08/2016 09:24
manan janaka 4 mianadahy zahay mivady. Samy manana ny sainy tokoa ny ankizy fa lay zanakay lahy no tena mahavaky ny lohako am maha reny ahy. Samy nitaizana tam sekoly alahady izireo fa asa na izy lay tokana no mahatonga anzao na ahoana satria lazainy fa miangatra zah amin ireo anabaviny, zay ataoko rehetra d critiquer ny daolo, tsy faly amze ataoko azy mitsy izy ,na dia efa manao zay fara heriko aza zah. Mba mila toro hevitra ô
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/08/2016 13:09
Ny fahalalako azy aloha, @ ankapobenhy, raha ny @ fitaizana, dia efa noresahina lavabe tato.
Raha ny hevitro ny @ zanakao lahy dia... Ny fahitako azy, dia mety hoe, mety ho'a fa tsy fantatro izay ao aminareo ao, mety hoe, ny firesahina na izay zavatra atao dia "teny midina" (foana). Izany hoe, ianao RaR no miteny, dia izy mpanaraka.
@ io resaka fitaizana io ambony io anefa, idealement, dia ilay zaza, na ireo zaza, no miteny ny "safidiny" sy izay "tiany ataony, na ataonao", fa ny RaR dia manampy, manamora ary mampirisika sy manohana. Io ilay manontany ny RaR hoe: "how can I help you".
Fa tsy mbola tara, fa ezaho hanontaniana azany izy, hoe, inona na ahoana no hanampiako anao, inona ny tianao... Dia mba hiezaka izy hieritreritra tsara tokoany, ary hilaza ny tiany sy safidiny.
Dia ataovy "carte dur table", hoe, nanao an'izao ianao fa izao ny antony. Dia eto koa, ny ahy aloha, dia tsoriko hoe, izay no nieritreretako natao. Tsisy mauvaise intention io fa izay no mba takatro. Izaho TSY parfait, ary tsisy fianarana manofana ho RaR. Ka mba ampio koa aho hanampy anao.
Izay aloha fa mahereza ary aza kivy na mora tezitra, fa raiso am-pitiavana sy am-pahalemem-panahy foana ilay zaza eee... rahatrizay ianao maka recul, dia ho hitanao fa tena tsisy dikany ny manenja-tady, na be teniteny mi-imposer lava ny hevitrao ao, ... fa ilay zaza anie afaka misaina, ary afaky ny ho raisonnable koa, rahefa ampianao izy, rahefa ampiteneninao izy. Rehefa ampisafidianao izy, dia ho hitanao fa hisafidy ny raisonnable sy mahasoa azy koa izy @ farany
booboo - 23/08/2016 23:33
Sao mety hanampy koa, maka fotoana manokana na fohy aza iarahana @ ilay zanakao lahy irery. Inona no tiany ? mitendry² gitara, mandeha², ? dia miaraka aminy manao izay tiany, atao tarazonareo mianaka irery. Tsy voatery hiresaka zavatra matotra be fa juste manala azy fotsiny miaraka aminy, rehefa hitany fa mahaliana anao ny tontolony dia hisokatra aminao ny fony afara ao.
Ny zanako vavimatoa rehefa manao tahaka ny zanakao lahy dia valiako izy hoe " tezitra velona ianao fa mahatsiaro tsy karakaraiko fa ny zandrinao foana no rarahiako e ? " Dia eo izy dia mitanisa ny alahelony sy ny hatezerany eo, dia valiako ohatra izay foana. Farany izy mitony² fa mahatsiaro ho " comprise ", dia izy ihany avy teo no miteny amiko hoe " neny, tiako raha miaraka manao rollers zà sy ianao irery fa tsisy an'i xxx " na " afaka manao gâteau tsika roa ? ". Izy ihany no mahita sy asaiko mitady ny solutions. Mbola kely mbola kely mihitsy izy 2 dia notaizaiko t@ zany. Ilay fandraisana ny émotions n'ny zanaka io no tsapako ndraindray lesoka amintsika rad.
Mirary soa be ho anareo mianaka.
Concept and Design © Serasera.org: Eugene Hery RSS
Tel +39 338 744 2412 (Italie)
Page rendered in 0.0179 seconds